गुण्डा गिरीलाई चौकीदार बनाउन मोरङ जेलमा सार्न खोज्दा असुली गर्छ भन्दै बन्दिहरुले रोके
"गिरीले आफ्नी प्रेमिकालाई प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका लेखा सहायक अच्युतप्रसाद रेग्मीलाई बन्धक बनाएर १० लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए। "
काठमाडौं- अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जेल परेका अभिषेक गिरीलाई मोरङ सरूवा गरिएपछि त्यहाँका कैदीबन्दी आन्दोलनमा निस्के। मोरङ प्रहरीका अनुसार गिरीलाई मंगलबार बिहान साढे ५ बजे कारागार पुर्‍याएपछि कैदीहरूले उनको विरोधमा आन्दोलन थाले।
मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीका अनुसार गिरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट मोरङ ल्याइएपछि विरोधमा कैदीहरूले आन्दोलन गर्दै ८ घन्टासम्म जेलभित्र पस्न दिएनन्।
‘उनी बिहानै कारागार हाताभित्र प्रवेश गरे पनि जेलभित्र छिर्न पाएनन्, कैदीहरूले उनलाई इन्ट्री नदिइयोस् भनेर आन्दोलन गरे,’ जिसीले भने।
कारागारमा आन्दोलन भएपछि गिरीलाई तत्कालका लागि सप्तरी कारागार पठाइएको जिसीले बताए।
कारागार व्यवस्थापन विभागले गिरीलाई गत भदौ १७ गते नै सरूवा गरेको थियो। सरूवालगत्तै विरोध सुरू भएपछि विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने बताएको थियो।
त्यसबेला कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहालले भनेका थिए- यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन।
उनले निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भनेको दुई महिनामा गिरीलाई मोरङ कारागार पुर्‍याएरै छोडियो।
विभागले राजनीतिक दबाबमा गिरीलाई मोरङ पठाएको बुझिएको छ। तर, यसबारे विभागका महानिर्देशक दाहालले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
गिरी विराटनगर देवकोटा चोकका स्थानीय हुन्। मोरङ कारागारमा रहँदा गिरीले जेलभित्रैबाट असुली र फिरौती धन्दा चलाएको आरोप लागेपछि २०७४ चैत २३ गते डिल्लीबजार कारागार सारिएको थियो।
गिरीलाई कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै मोरङ कारागार पठाउन स्थानीय नेताहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग ‘लबिङ’ सुरू गरेका थिए।
पहिले मोरङ कारागारमा रहँदा गिरी चौकीदार थिए। चौकीदारले जेलभित्र राम्रो आम्दानी गर्छन्।
गिरीलाई चौकीदार बनाउने योजनाअनुसार भदौ १७ गते उनलाई सरूवा गरिएको कारागार विभाग स्रोत बताउँछ। गिरीको सरूवाअघि चौकीदार रहेका नवीन राईलाई झुम्का कारागार सरूवा गरिएको थियो।
तर, विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआएपछि मोरङ कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दोषी किरण गुरुङ चौकीदार बनाइएका थिए।
‘अहिले इन्ट्री गराउने र विस्तारै चौकीदार बनाउने योजनामा गिरीलाई विरोध हुँदाहुँदै पनि मोरङ कारागार ल्याइएको देखिन्छ,’ मोरङ प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘साधारणत: जेलभित्रै अपराध धन्दा चलाउने व्यक्तिलाई पुन: त्यही कारागारमा पठाउनु हुँदैन भनिन्छ।’
२५० जनाको क्षमता रहेको मोरङ कारागारमा ९६७ जना कैदीबन्दी छन्।
गिरीको सरूवाबारे गत शनिबार पत्रकारहरूले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन हुँदा गृहमन्त्री खाणलाई प्रश्न सोधेका थिए।
उनले ‘कारागार व्यवस्थापन विभाग’को क्षेत्रभित्रको कुरा भन्दै यसमा गृह मन्त्रालयको भूमिका नहुने बताएका थिए।
१२ वर्ष जेलयात्रा, जेलबाटै फिरौती र हत्याका योजना
युवती प्रयोग गरी सरकारी कर्मचारीलाई बन्धक बनाएर फिरौती मागेको आरोपमा गिरीलाई प्रहरीले २०७० सालमा पक्राउ गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका लेखा सहायक अच्युतप्रसाद रेग्मीलाई बन्धक बनाएर रकम मागेको आरोपमा गिरीसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
गिरीले आफ्नी प्रेमिकालाई प्रयोग गरेर रेग्मीलाई बन्धक बनाएका थिए। शारदा सिलवाल भन्ने कवितादेवि शाक्यले बोलाएर सानेपास्थित डेरामा पुगेका रेग्मीलाई त्यहाँ बसेका दुई युवकले समातेर कुटपीट गर्नुका साथै नांगो बनाएर युवतीसँग फोटो खिचेर गिरीले दश लाख रुपयाँ फिरौती माग गरेका थिए । यही प्रकरणमा गिरी जेलमा छन्। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत गिरीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
पछिल्लो पटक पक्राउ पर्नुअघि २०६९ सालमा उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएर जेलमुक्त भएका थिए।
२०६५ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा टेण्डर लुट्न जाँदा भएको झडपमा करण यादव मारिएका थिए।
विराटनगरमा आपराधिक गतिविधि चलाउने पर्शुराम बस्नेत र गिरी दुबै समूह टेण्डर लुट्न गएकोमा यादव मारिएपछि गिरी पक्राउ परे।
तर, आफ्नै समूहका एक जनाले घटनाको जिम्मेवारी लिँदै अदालतमा बयान दिएपछि गिरीले २०६९ सालमा सफाइ पाएका थिए।
सफाइ पाएर छुटेको केही महिनामै पक्राउ परेका गिरी त्यसयता लगातार ८ वर्षयता जेलमा छन्।
करण यादवको हत्यामा केन्द्रीय कारागारमा रहँदा पनि उनी आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय नै थिए।
काठमाडौंका व्यवसायी ध्यानगोविन्द वैद्यको अपहरणमा योजना बनाएको खुलेपछि केन्द्रीय कारागारबाट उनलाई नुवाकोट सारियो। तर त्यहाँबाट पनि उनले अपराध छोडेनन्।
नुवाकोट जेलमै रहेका सशस्त्र समूहका छोटा राजन समूहसँग मिलेर कल बाइपास गरी मोरङका व्यापारीलाई धम्क्याउँदै पैसा मागेको आरोप गिरीलाई लाग्यो। प्रहरीले जेलमा छापा मार्दा कल बाइपासका सामग्री फेला पारेको थियो।
अभिषेकको अपराध त्यहाँ पनि नरोकिएपछि उनलाई मोरङ कारागार नै पठाउने योजना भयो। तर, मोरङ कारागारले राख्न नमानेपछि गिरीलाई सुनसरीको झुम्कास्थित कारागारमा राखिएको थियो।
त्यहाँ बस्दा पनि अभिषेकले अपराध छोडेनन्। २०६६ साल फागुन महिनामा जेलबाटै मान्छे खटाएर गिरीले पर्शुरामलाई दुई गोली हान्न लगाए। दुई महिना लामो सघन उपचारपछि पर्शुराम तंग्रिए।
त्यसको ‘बदला’ लिन पर्शुराम समूहले २०६८ साल जेठ १८ गते पेशी बयानमा जिल्ला अदालत मोरङ ल्याउँदा गिरीलाई आक्रमण गरे। पर्शुराम समूहले आक्रमण गर्दा गिरी घाइते भएका थिए, अदालतभित्र प्रहरीले गोली चलाएको थियो।
गिरीलाई किन लगियो मोरङ कारागार?
कांग्रेस मोरङका नेताहरूका अनुसार गिरीलाई पार्टीभित्रैको एउटा समूहले मोरङ कारागारमै राख्न चाहन्छ। त्यसको अर्थ हो – पर्शुरामका गतिविधिमा उनले सघन निगरानी राखुन्।
गिरी जेल परिकन मोरङको आपराधिक दुनियाँमा पर्शुरामको हालीमुहाली छ। उनी आपराधिक गतिविधिसँगै राजनीतिमा समानान्तर रूपमा सक्रिय छन्। पर्शुरामको सक्रियता दिनदिनै बढिरहँदा गिरी समूह भने ओझेलमा छ।
कांग्रेसका केही स्थानीय नेताहरू पर्शुरामको गतिविधिलाई ‘साइज’मा ल्याउने उपयुक्त पात्र गिरीलाई ठान्छन्।
मोरङ एमालेमा पर्शुरामको भागबण्डा नै चल्छ। उनी आफू या आफ्नो समूहलाई एमाले राजनीतिमा सकेसम्म स्थापित गराउन चाहन्छन्। राजनीतिमार्फत् उनी आफ्नो आपराधिक कमाइलाई ‘लालमोहर’ लगाउन चाहन्छन्।
केही दिनअघि मात्रै एमालेले पालिकास्तरको अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो। एमाले विराटनगर महानगरपालिकाको अध्यक्ष बन्न पर्शुरामले जोड चलाए।
पर्शुराम समूहकै कित्ताबाट सागर थापा पनि अध्यक्ष बन्न अघि सरे। पर्शुराम सहमतिमा नआएपछि चुनावको वातावरण बन्न खोज्यो।
अन्तिममा पर्शुरामले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा रोहित कोइराला सचिव पदमा भएमात्र आफूले छाड्ने अडान राखे।
त्यसपछि एमालेको विराटनगर कमिटीमा सागर थापा अध्यक्ष र रोहित कोइराला सचिव भए।
‘यसको अर्थ विराटनगर महानगरको पार्टीपंक्तिमा पर्शुरामको जबरजस्त भूमिका छ र कुनै न कुनै रूपमा पर्शुरामले विराटनगरमा अपराधको मनोविज्ञान कायमै छ भन्ने सन्देश यहाँको समाजमा छोड्न चाहन्छन्,’ एमालेकै एक नेताले भने।
यसबाहेक पर्शुराम हालै राजनीतिक नियुक्ति पाएर प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव भए। सदस्यसचिवको लागि लामो समयदेखि आकांक्षा राख्दै आएका कांग्रेस-माओवादीका खेलकुदकर्मी जिल्ल परे।
खेलकुदमा सक्रियता नै नरहेका व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएपछि पर्शुरामको विपक्षमा कांग्रेस-माओवादीको ‘गठ’ बनेको छ। ‘यसले पर्शुरामको गतिविधि नियन्त्रण भएको देख्न चाहन्छ र त्यसका लागि गिरीको आगमन उपयुक्त हो भन्ने ठान्छ,’ ती नेताले भने।
राजनीतिमा छाउँदै नियुक्तिमा बाजी मार्न थालेपछि पर्शुराममाथि प्रहरी प्रशासनको सूक्ष्म निगरानी कम हुँदै गएको छ।
गिरी सुरूमा एमाले निकट बस्नेतसँगै अवैध असुलीमा थिए। २०६४ सालमा धरानमा लुटपाट घटना हुँदा पर्शुराम र गिरीबीच लेनदेनमा विवाद भएको थियो। त्यही घटनाबाट पर्शुराम र गिरीको समूह औपचारिक रूपमा अलग भएको मानिन्छ।
जेलमा चौकीदार बन्न किन मरिहत्ते ?
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार जेलमा कानुनसम्मत रूपमै चौकीदार चयन हुन्छन्। चौकीदारको पछिपछि विभिन्न तहमा ‘नाइके’हरू हुन्छन्।
कैदीहरूको व्यवस्थापन, औषधी-उपचार, खाद्यान्न आपूर्ति लगायतमा चौकीदारको भूमिका हुन्छ। उसले जेलभित्र पसल चलाउने, मेस चलाउने, खाद्यान्न आपूर्ति गराउने जिम्मा पाउँछ। यसबाट निकै राम्रो आम्दानी हुने भएकाले चौकीदार बन्न जेलभित्रका अपराधीहरू सक्रिय रूपमा लाग्ने गर्छन्।
राजनीतिक दलसँग निकट र सहयोगी रहेका व्यक्तिले त नेताहरूलाई प्रयोग गरेर जेलभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्छन्। गिरीले पनि त्यही चाहेको देखिन्छ।
चौकीदार चयनका लागि जेलभित्रका कैदीबन्दीबीच सहमति वा चुनावै पनि हुने गर्छ। त्यसरी जो चयन हुन्छ उसलाई चौकीदार बनाउन कारागार प्रशासनमा कुरा पुर्‍याइन्छ।
प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराएर चौकीदार तोक्छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘हामीले सुरक्षा दिने हो, कैदीबन्दीको सरूवाबारे कारागार व्यवस्थापन विभागले निर्णय गर्ने हो।’
तत्कालका लागि गिरीलाई सप्तरी पठाएपछि कैदीबन्दीले आन्दोलन रोकेका छन्।